तुलसीपुर ९ मा वाईसियल गठन « Tulsipur Khabar
तुलसीपुर ९ मा वाईसियल गठन
तुलसीपुर, २४ जेठ /
तुलसीपुर उप-महानगरपालिका वडा नं. ९ मा वाईसियलको गठन भएको छ । चुनवालाई लक्षित गर्दे वाईसियल गठन गरिएको हो । मंगलवार वेलुवास्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको सम्पर्क कार्यालयमा भएको भेलाले ५५ सदस्य वाईसियल गठन गरेको हो ।
पहलबहादुर विकको अध्यक्षतामा वाईसियल गठन भएको हो । माओवादी केन्द्रका वडा कमिटी अध्यक्ष मदन प्रकास हमालको अध्यक्षता र माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय आयोजक कमिटीका सदस्य प्रेमराज वलीको प्रमुख आथित्यमा भेला भएको हो ।
कार्यक्रमलाई वाइसियल तुलसीपुर उप–महानगरपालिका अध्यक्ष तथा भेलाका विशिष्ट अतिथि माधव बुढाथोकी, माओवादी केन्द्रवाट वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार केशवबहादुर वली लगायतले मनतब्य व्यक्त गरेका थिए । भिमबहादुर वलीको स्वागत मनतब्य वाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण पार्टीका वडा कमिटी सचिव प्रेमबहादुर विकले गरेका थिए ।